Atlanta United FC vs. América - Warbixinta ciyaaraha kubbadda cagta - 14 Agoosto, 2019 - ESPN - TELES RELAY
ACCUEIL » SPORTS Atlanta United FC vs. América - Warbixinta ciyaaraha kubbadda cagta - 14 Agoosto, 2019 - ESPN
Atlanta United FC vs. América - Warbixinta ciyaaraha kubbadda cagta - 14 Agoosto, 2019 - ESPN
Josef Martinez wuxuu dhaliyay guushii 3-2 ee ay ka gaareen Atlanta United kana horjeeday Club America isla markaana ku guuleysatay 2019 Campeones Cup ka dib ciyaar xiisa badan oo ka dhacday garoonka Mercedes-Benz.
Martinez ayaa dhaliyay goolkii seddexaad ee Horyaalkii MLS ee Atlanta rigooradii loo dhigay booska 65e, ka dib markii uu dhaliyay rigoore qeybtii hore.
Koobka loo yaqaan 'Campeones Cup' waxaa sanad walba ka dhexeeya horyaalnimada MLS iyo kooxda Campeon de Campeones ee horyaalka MX, Tigers ayaa ka adkaaday kooxda Toronto FC markii ugu horreysay ee 2018.
Ciyaarta ayaa ku bilaabatay xawaare deg deg ah mana joogsan. Atlanta ayaa hogaanka qabatay daqiiqaddii 5e Emerson Hyndman oo u suurtagashay inuu ka gudbo Dion Pereira . oo uu garaacay goolhayaha reer Oscar Jimenez.
Ciyaartoyda Atlanta United ayaa u dabaal dagaya ka dib markii ay ka badiyeen Club America koobka Campeones Cup. USA Today Images
Kooxda heysata Horyaalnimada MX ee 2018 Apertura ayaa ka falcelisay goorta Renato Ibarra waxa uu dhaliyay darbo ka timid iskutallaabta 13 kadib ciyaaryahanka heerka caalami ee reer Colombia Roger Martinez .
Bruno Valdez qalad ayuu galay gudaha xerada ganaaxa dhexdeeda wuxuuna ku siin karay Atlanta inay ku hogaamiso 41e, laakiin rigooradiisa - waxaa la qaatay
Mareykanka ayaa hoggaanka u qabtay booska 57th markii Martinez uu kubad kubad geeska ka toogtay, laakiin darbo dheer oo isdifaacday ayaa ka timid Jeff Larentowicz is le'eg. dhibcaha ilaa 2-2 laba daqiiqo ka dib.
Martinez ayaa ka soo kabtay guuldaradiisii ​​hore ee uu la kulmay guusha, America ayaa ciyaarta gadaal ka riixaysay laakiin awoodi weyday inay hesho goolka barbaraha. Hawshu way sii adkaatay markii Valdez uu qaatay kaarkiisii ​​labaad ee jaalaha daqiiqadii 72e waana la diray.
Atlanta waxay haysatay inta badan heysashada 57% iyo darbo dheeri ah oo la bartilmaameedsaday (9-6), laakiin labada kooxba waxay duulaanka ku qaadeen taakulada labada koox midkoodna ma lahayn waayihii xukunka.
Maqaalkani wuxuu horey u soo galay (Ingiriisi) http://espn.com/soccer/report?gameId=539389
Dhibcaha Akindele ee Orlando City guushii 1-0 ee ay ka gaartay Sporting KC
Ku guuleystayaasha Virgin Salt Lake 3-0